Qalabka falanqaynta App Store ayaa hadda la heli karaa | Wararka IPhone
Haddii aad tahay horumariye oo aadan iska qori karin beta si aad isugu daydo qalab cusub oo Apple Falanqeyn ah, ha ka welwelin maxaa yeelay horeyba waa loo heli karaa si xor ah. Codsigan websaydhka cusub ayaa lagu bilaabay marxalad tijaabo ah bilowga bisha laakiin dhawr maalmood oo tijaabo ah ka dib, Apple waxay go'aansatay inay joojiso hawshan una oggolaato dhammaan horumariyeyaashu inay ku raaxaystaan ​​tirakoob faahfaahsan oo ku saabsan codsiyada ay ku daabaceen App Store.
Thanks to iTunes Connect Analysis, si sax ah ayaad u ogaan kartaa sida isticmaaluhu u dhaqmo markuu helo codsigeena. Gaar ahaan, Thanks to Analytics, horumariyayaashu waxay:
Arag Inta jeer ee isticmaaleyaashu ku soo booqdaan boggaaga App Store.
Ogow inta isticmaale ee furan barnaamijka waqti ka dib.
Hubi iibka ku-darista iibsiga abka
Abuur ololeyaal suuqgeyn gaar ah oo hubi guushooda.
Soo ogow boggaga internetka ee sida aadka ah uga hadla codsiyadaada.
Kuwii ku raaxeysanayey Falanqaynta dhowr maalmood ayaa sidaas isku raacay qalabkani inuu dhakhso u yimaado. Iyada oo ay sii kordheyso App Store, istaagiddu waa mid cakiran oo xogta ay bixisay korantadan, waxaa suurtagal ah in si fiican loo fahmo waxa aan ku fashilmayno oo aan hagaajino ama, haddii aan si wanaagsan u sameyneyno, aan u sii xoojinno xitaa in ka sii badan.
Recuerda que marin u helka aaladda ayaa ku xaddidan kuwa wax dhisaya kuwaas oo hadda ka diiwaangashan barnaamijka horumarinta arjiga ee iOS, marinka kaliya ee ansax ah ee lagu galayo iTunes Connect oo awood u leh inuu helo tirakoobka codsiyada lagu daabacay App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » Qalabka falanqaynta ee iTunes Connect ayaa hadda loo heli karaa qof walba